TAARIIKH: Goolhayaha Liverpool Ee Alisson Becker Oo Taariikh Aan ABID Isaga Hortii La Dhigin Soo Diiwaan Gashaday Xilli Ciyaareedkan 2018-19!!. - Gool24.Net
TAARIIKH: Goolhayaha Liverpool Ee Alisson Becker Oo Taariikh Aan ABID Isaga Hortii La Dhigin Soo Diiwaan Gashaday Xilli Ciyaareedkan 2018-19!!.
Goolhayaha kooxda Liverpool iyo xulka qaranka Brazil ee Alisson Becker ayaan abid ilaabi doonin xilli ciyaareedkan dhammaadka ah ee 2018-19 marka loo eego wacdaraha uu soo dhigay iyo sida uu taariikhda iskugu qoray.
Alisson ayaa suuqa xagaagii hore Liverpool ugu soo biiray lacag dhan £67 Milyan balse waxa uu soo muujiyay bandhig lacagtiisaas wax aad u jaban ka dhigaya isaga oo kula soo guuleystay Champions League.
Taariikhda uu haatan dhigay Alisson isla markaana aan isaga hortii abid la dhigin ayaa ah inuu noqday goolhayihii ugu horreeyay ee hal xilli ciyaareed kusoo wada guuleystay saddexley gacmo dahaba ah.
Alisson ayaa soo ilaashaday shabaqiisa in ka badan goolhaye kasta kulamadii horyaalka Premier League (21 kulan) walow ay ugu dambayn tartankaas u waayeen Manchester City.
Si lamid ah horyaalka, Alisson ayaa sidoo kale soo ilaashaday shabaqiisa in ka badan goolhaye kasta oo kale kulamadii tartankii ay soo qaadeen ee UEFA Champions League.
Sidoo kale Becker ayaa xilli horeba xaqiijistay abaalmarinta gacanta dahabka ah ee tartanka Copa America oo aysan wali kulankiisa Final-ka ah ciyaarinba.
Xulka Brazil ayaan wax gool ah laga soo dhalin dhammaan shanta kulan ee ay kasoo ciyaareen tartankaas taas oo u xaqiijinaysa hanashada gacanta dahabka ah ee Copa.
Waxa intaas dheer in Alisson uu sagaalkii kulan ee ugu dambeeyay ee xul iyo kooxba uu shabaq nadiif ah lasoo baxay waxaana goolkiisii ugu dambeeyay laga soo dhaliyay kulankii ay Reds guusha 3-2 ah kasoo gaadheen Newcastle United.
Si kastaba ha ahaatee, Alisson iyo daafaca kooxdiisa ee Virgil Van Dijk ayaa loo arkaa labada nin ee udub dhaxaadka u ah isbedelka iyo horumarka deg dega ah ee ay Liverpool soo samaysay xilli ciyaareedkii hore.